Holmes ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာသမိုင်း Society က | Holmbygden.se
Holmes ဖွဲ့စည်းခဲ့hembygdsförening 1983 လူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးမျိုး၏အမှတ်တရများကာကွယ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်. အတိတ်ကြိမ်အတွင်း Holmes စီရင်စုနယ်ဘဝနှင့်လှုပ်ရှားမှုများမီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြင့်, အကျိုးစီးပွားနိုးနှင့်အမိမြေ၏အနီးကပ်မေတ္တာတော်ကိုဖန်တီးနဲ့တူ.
အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ကျေးလက်ဂိမ်းကို set up ကိုအခြားအမှုအရာတို့တွင်ရှိပါတယ် “Österströmဘုရင်” နှင့် “မေးလ်လုယက်မှု”. ဒါဟာအစအရှေ့ပါဝါလိုင်းအကြောင်းရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Loviken အတွက် Big ကျောက်ခေတ် boathouses ၏ကော့ညက်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကဲ့သို့သောသမိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦး၏ပြုပြင်မှုများပြီးစီးခဲ့ပါသည်.
ဥက္ကဋ္ဌဦး. Göran Loviken 0692-510 42 och လျှို့ဝှက်ချက်. Sonja Filipsson 0692-510 51
26/9: utah: သတိပေးခြင်းလူတန်းစား 1, အများကြီးဆံပင် ... အလွန်ခဲယဉ်းနှင့်အတူအနောက်ဘက်လေတိုက် ... ဆက်ဖတ်ရန်
19/10: Sundsvall–Ånge (တိုး ...
Fram t o m söndag 26 oktober är all tågtraf... ဆက်ဖတ်ရန်